Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Tilmaamaha Ugu Dambeeya ee Sida Loo Xulo 6 Nooc Oo Ka Mid Ah Qalabka Qalabka Musqusha
2020 / 10 / 22 QoondayntaTilmaamaha qasabada 7458 0
Qurxinta, waxaa badanaa la yiraahdaa "jikada dahabiga ah iyo musqusha lacagta ah", marka lagu daro musqulaha, qolalka qubeyska, armaajooyinka musqusha iyo waxyaabo kale oo waaweyn, qalabka musqusha sidoo kale waa mid aad iyo aad muhiim u ah. Haddii qubeyska aan si sax ah loo dooran, wuu miridhmi doonaa, xannibi doonaa, oo yeelan doonaa bakteeriya. Haddii gogosha sagxadda aan la dooran, waa la xannibi doonaa, gadaal gadaal ayey noqon doontaa, ur ayey leedahay, iwm. Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa sida loo iibsado qalabka musqusha.
1. Qalabka musqusha waxaa laga soo xulay maaddada, maaddada loo yaqaan 'chrome plating copper' ayaa ugu fiican, oo ay ku xigto dahaadhka birta birta ah ee birta ah, aluminium aluminium aluminium ah, birta chromium alloy. (Waxaa lagugula talinayaa inaad u isticmaasho walxaha naxaasta ah iyo kuwa loo yaqaan 'chrome-plated' ee madaxa qubeyska, taas oo waari karta oo qurux badan.)
2. Maaddada maarta ah waxay u qaybsan tahay 52 naxaas, 55 naxaas, 59 naxaas iyo 62 naxaas ah. Heerarka qaranka ayaa qeexaya in waxyaabaha ku jira naxaasta ee alaabta nadaafadda ay tahay 59%, maaddada macdanta "lead" ay tahay 1%, inta soo hartayna waa cunsurro sida zinc, oo ah waxa loogu yeero 59 naxaas. Sidaa darteed, marka la dooranayo alaabada nadaafadda, waa inaan doorannaa 59 naxaas ah ama 62 naxaas ah, caag naxaas aad u hooseeya iyo caabbinta daxalka ma noqon doonto mid ku habboon.
3. Ku qiimee inay fiicantahay iyo inay xun tahay adigoo garaacaya gacantaada, dhawaq cufan, tayo fiican leh, hana dooran haddii dhawaqu uu caajis yahay. U fiirsashada daaha dusha sare, waa mid nadiif ah oo aan cillad lahayn, waxaana loo isticmaali karaa muraayad, taasoo muujinaysa in lakabka korantada uu tayo ahaan aad u sarreeyo. Dahaarka tayada sare leh wuxuu u qaybsan yahay saddex lakab. Lakabka hoose waa nikkel-plated, dhexda waxaa lagu xardhay naxaas aashito iyo naxaas koronto leh, dushana waa chrome-plated.
4. Neefta afkaaga ku hayso, ceeryaamadu si dhakhso leh ayey u baaba'aysaa oo iska cad, taas oo muujinaysa in naxaasku yahay chrome-plated. Haddii uu si tartiib ah u baaba'o ama ay raadad leeyihiin, waa bir bir ah.
5. Ku saabsan qubayska heerkulka joogtada ah, kululeeyaha biyaha gaaska guud ahaan waxaa lagu rakibay guryaha. Kuleyliyaha biyaha laftiisu wuxuu leeyahay saameyn heerkulka joogtada ah wuxuuna si wax ku ool ah u xakameyn karaa heerkulka biyaha. Laakiin mararka qaarkood sababo la xiriira saameynta cadaadiska biyaha, ama qof gacmaha iska dhaqo inta uu qubaysanayo, iwm, heerkulka biyuhu wuxuu noqon doonaa mid kulul oo qabow. Xuddunta qubeyska heerkulbeeggu waa xuddunta mashiinka waalka, kaas oo samayn kara is-xakameyn marka loo eego heerkulka la dejiyey. Xakamee heerkulka biyaha adiga oo aan dhib ku ahayn hagaajinta iyo hagaajinta. Isla mar ahaantaana, qubeyska heerkulka heerkulbeegga sidoo kale wuxuu leeyahay shaqeyn culeys leh. Haddii badhanka si shil ah loo taabto oo heerkulka biyuhu ka sarreeyo heer-kulka loo dejiyey, si otomaatig ah ayuu biyaha u gooyaa. Waxaa lagugula talinayaa in waayeelka iyo caruurta guriga joogta ay isticmaalaan qubeys heerkulbeeg leh. (Ujeeddada hagaajinta heerkulka qubeyska heerkulbeegga ayaa ah in heerkulka hore ee kuleyliyaha biyaha uu ka sarreeyaa heerkulka hore ee qubeyska heerkulka, si heerkulka biyaha si wax ku ool ah loogu hagaajiyo.)
6. Waxaa lagugula talinayaa in loo isticmaalo silica gel nozzles musqusha qubeyska. Caadi ahaan, saameynta tayada biyaha awgeed, way fududahay in la sameeyo cabir xaga nozzles muddo dheer. Xaaladdan oo kale, miisaanka si fudud ayaa looga saari karaa adigoo taabanaya walxaha caagga ah ee gacanta.
7. Waxaa lagugula talinayaa inaad ku qubeysato qubayska oo ay la socoto shaqeynta cirbada hawada. Shaqada cirbadeynta hawadu waa in hawada lagu durayo biyaha, si biyuhu ay u noqdaan kuwo jilicsan, waxayna dareemi doontaa raaxo aad u badan in lagu maydho jirka.
8. Waxaa jira shahaado cUPC ah oo loogu talagalay alaabada fayadhowrka, iyo alaabada fayodhowrka cUPC-shahaado ayaa sidoo kale ka tarjumi kara tayada ugu fiican ee alaabta. Sidaa darteed, markaad iibsaneyso qubeys, waad hubin kartaa inuu jiro caddeyn cUPC, oo sidoo kale ka mid ah heerarka baaritaanka tayada.
1. Xulashada qalabka qasabada ayaa la mid ah madaxa qubeyska. Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho maaddada naxaasta iyo chrome. Xudunta naxaasku door aad u wanaagsan ayey ka ciyaari kartaa ka hortagga miridhku, oo dusha sare waxaa lagu daaweeyaa koronto-siinta koronto, xitaa haddii muddo dheer la isticmaalayo, waxay u dhalaalaysaa sida cusub ee xoqidda kadib.
2. Xuddunta waalka ee qasabadda ayaa laga door bidaa dhoobada dhoobada, oo leh waxqabadka shaabad wanaagsan, biyo socda oo caadi ah, mana sahlana in bakteeriyada la haysto.
3. Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho qasabad jiidaya, taas oo aad ugu habboon in la isticmaalo.
Saddex, tuwaal shukumaan ah
1. Chrome dahaadhka naxaasta
Lakabka chromium ayaa lagu dhajiyay dusha naxaasta. Dhamaadku waa wanaagsan yahay. Waxyaabaha jireed ee chromium waa kuwo xasilloon oo lebbiska u adkaysta. Ka dib sanado badan oo xoqitaan ah, waxay la mid noqon doontaa mid cusub. Copper iyo qalabka chrome-plated waa kuwo qiimo jaban, tayada sidoo kale waa mid aad u fiican. Sidaa darteed, walxaha naxaasta leh ee lagu xardho naxaasta ayaa lagula talinayaa.
2. Qalabka zinc
Waxaa lagu samayn karaa midabyo badan, qaabab iyo qaabab badan
3. Maaddada Maarta ah
Waxay leedahay xasillooni wanaagsan iyo cufnaan sare. Ka dib koronto-siinta iyo nadiifinta ka dib, waxay leedahay waxqabad ka soo horjeedda miridhku mana yaraado Dabcan, sicirka waa mid aad u sarreeya. Milkiileyaasha leh dareen tayo leh waxay dooran karaan xirmo shukumaan naxaas ah.
4. Birta aan birta lahayn
Bir daxal leh oo heer hoose ah ayaa u fududahay miridhku. Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho birta aan xarka lahayn ee ka sarreysa 304. Dusha sare waa la nadiifin karaa oo la cadeyn karaa, iyada oo leh qaab wanaagsan iyo waxqabadka qiimaha sare.
5. Aluminium bannaan
Qalabka aluminium ee bannaan waa mid fudud, culeys wanaagsan, xirashada caabbinta, iska caabinta daxalka, iska caabinta qiiqa, iyo waxqabadka wanaagsan. Waxaa si xoog leh lagula talinayaa inaad iibsato qalabka aluminium ee bannaan, oo adkaysi u leh.
Ka dib markii aluminiumta ay oksijiin tahay, adkaanta si weyn ayaa loo hagaajiyaa, ma miridho, ma oksijiye iyo madow, waxayna leedahay iska caabin wanaagsan oo duug ah. Waxay ka tirsan tahay nooc ka mid ah alaabooyinka leh waxqabadka qiimaha sare.
Afar, dambiil koone
1. Dambiisha geeska waxaa guud ahaan la dhigaa geeska musqusha, mana qaadanayso meel. Waxaa loo isticmaalaa in lagu dhejiyo qalabka musqusha oo aad ayey ugu habboon tahay in la isticmaalo use
2. Laga soo bilaabo maadada, dambiisha geeska waxaa loo qaybin karaa birta aan lahayn, dhalooyinka iyo alaabada caagga ah. Maaddaama dambiilaha geesku ay ka koobnaan doonaan shaambo, qaboojiye, jel qubeys, saabuun, koobabka cadayga iyo waxyaabaha kale ee musqusha, waxaa jira waxyaabo badan miisaankuna ma fududa, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad u isticmaasho dambiilo gees gees bir birta ka samaysan oo laba-lakab ah qaab-dhismeedka Wanaagsan, awood qaadasho xoog leh.
Shan, waalka xagal
In kasta oo waalka xagalku yahay shey yar, ha iska indha tirin muhiimadiisa. Farsamooyinka xagalka ee tayada liita waxay u nugul yihiin daadashada biyaha iyo qarxinta tuubada.
1. Marka la eego maaddada, maaddada maarta ayaa leh caabbinta daxalka oo wanaagsan. Waxaa ugufiican in aan la isticmaalin wax dahaaran. Maadada Daawaha waa fududahay in la xoqo oo miridhku galo, taas oo sababi doonta baxsiga biyaha. Ku beddel miridhku ka dib, way fududahay in la jebiyo dekedda biyaha qaata, taas oo dhib badan tahay in la beddelo.
2. Dhumucda gidaarka dhumucda xagasha, ayaa ka sii fiicnaanaysa qarxinteeda iyo iska caabinteeda. Dhumucda gidaarka ee waalka xagalka wanaagsan wuxuu gaaraa 3.4mm. Waxay u dhigantaa dhumucda laba qadaadiic oo ah hal-yuan.
3. Lakabka elektaroonigga ee tayada sare leh ayaa sidoo kale xaqiijin kara caabbinta daxalka. Dahaarka tayada sare leh waxaa loo qaybiyaa seddex lakab, lakabka hoose waa nikkel-plated, dhexda waxaa lagu xardhay aashitada naaska iyo korantada korantada, iyo dusha sare waxaa lagu dhejiyay chrome. Dusha sare ee dahaadhka ayaa u siman sida muraayadda oo kale, oo aan lahayn cillado.
Lix, qulqulka dhulka
Qulqulka dabaqa waa xiriir muhiim ah oo udhaxeeya dhuumaha bullaacadaha iyo dabaqa gudaha, iyo qeyb muhiim u ah dheecaanka. Waxqabadkeedu wuxuu si toos ah u go'aamiyaa hufnaanta dheecaanka, wuxuuna leeyahay shaqooyinka ka hortagga urta, cayayaanka, xirmidda, jeermiska, iyo dib u qulqulka. Haddii sagxadda dhulka aan si sax ah loo xushay, haddii ay u baahan tahay in la beddelo, way fududahay in la waxyeeleeyo lakabka biyuhu ka soo baxaan waxaana dhici kara in biyo-mareenku Waxay sababtaa qatarta qarsoon ee daadinta biyaha, marka waa inaad iibsataa gogol fiican oo dabaq ah si looga fogaado dhibaato.
1. Qashin-qubka dabaqa oo biyaha ku xidhan
Qashin-qubka biyaha ku xirmay ayaa sidoo kale loo yaqaannaa qulqulka dabaqa U-qaabeeya. Waxay ku tiirsan tahay biyaha ku jira godka keydka biyaha si ay u go'doomiyaan urta. Qoto dheerida biyuhu waa inay ka badnaato 50mm si loo helo cadaadis ku filan oo daboolan si looga hortago urta inay soo noqoto. Sidaa darteed, qoto dheer ee qashin-qubka biyaha kuxiran-biyoodku waa mid qoto dheer, oo caabbinta bullaacaddu wey badan tahay, waana sahlan tahay in la dhigo dhoobada iyo timaha tubbada U-qaabeysan, taasoo keenta xannibaad. Dhibaatada kale ee jirta ayaa ah kadib markii biyaha ku keydsan dhulka hoostiisa ay uumi baxaan, hadii aysan biyuhu mar kale soo qulquleynin, saameynta sun-biyoodka ayaa saameyn ku yeelan doonta biyo ku filan oo ku filan awgeed. Isla mar ahaantaana, bullaacadda dabaqda biyaha ku xidhan ma laha qaab go'doon farsamo qaab dhismeedka, sidaa darteed ma ciyaari karo doorka ka hortagga qulqulka iyo cayayaanka. .
2. Nooca silsiladda ee bannaanka u ah bullaacadda qashin qubka mashiinka
Dabaqa noocan oo kale ah waxaa sidoo kale loo yaqaannaa dheecaanka dhulka ee qaabeeya T, qaab dhismeedka dhulka hoostiisa mara, iyo bullaacadaha dhulka hoostiisa mara. Qulqulka dhulka waxaa lagu furaa culeyska biyaha marka uu daadanayo, daaqada dhulka ayaa si otomaatig ah u xirmi doonta ka dib marka biyaha la miiro. Qulqulka noocan oo kale ah wuxuu si fiican uga hortagi karaa cayayaanka, laakiin guud ahaan qashin-saarka noocaan ah wuxuu isticmaali doonaa guga, guguna wuu jabi doonaa waqti dheer kadib, cadaadiska qufulka kuma filna inuu ka hortago urta.
3. Nooca safka kaydinta tamarta qashin qubka dabaqa hoose ee farsamada
Dabaqa noocan ah ayaa ka gudbaya cilladaha labada nooc ee ka hooseeya bulaacadaha. Taangiga gudihiisa ayaa lagu darayaa gunta hoose ee qashin-qubka, taangiga gudahana waxaa lagu buuxiyaa biyo ku yaal qashin-qubka dhulka, waxaana ka furaya gororiyaha dhulka culeyska taangiga gudaha. Nooca daaqada dhulka ayaa leh awood furitaan joogto ah, barakac ballaaran iyo waxqabad aad u fiican.
Isku soo wada duuboo, waxaan ku xukumi karnaa waxqabadka qalabka qalabkiisa iyo qaab dhismeedkiisa. Iibsashada qalab wanaagsan waxay badbaadin kartaa dhibaato badan isticmaalka dambe.
Hore:: Maxay u kala duwanyihiin inta udhaxeysa $ 30 iyo $ 300 qasabada biyaha? Next: Waa maxay astaanta qalabka musqusha ee wanaagsan?